Global Voices teny Malagasy » Taorian’ny Fanafihana Tao Parisy: Ho Firaisan-tsaina, Tsy Afaka Hifanavakavaka · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 16 Novambra 2015 14:46 GMT 1	 · Mpanoratra Laura Vidal Nandika Sylvia Aimée
Sokajy: Eoropa Andrefana, Frantsa, Ady & Fifandirana, Fanabeazana, Fifandraisana iraisam-pirenena, Fifindràmonina, Foko sy Fiaviana, Hevitra, Mediam-bahoaka, Tanora, Zon'olombelona, Ny Tetezana - The Bridge
Famoriana vahoaka tao Parisy ho fanohanana ireo niharam-boina tamin'ilay tifitra nanjo ny Charlie Hebdo tamin'ny 11 Janoary 2015. Sary an'i D B Young tao amin'ny Wikimedia Commons.
Nanohina mafy ahy ireo fanafihana tao Parisy ny Zoma lasa teo, sy ny ntranga tany Beiroty ny omalin'io. Tafahitsoka niaraka tamin'ireo namako tao amin'ny trano iray fisotroana tsy lavitra loatra ny iray tamin'ireo trano fisakafoanana natao lasibatra aho, nampanontany tena ahy ny antony nisafidianana ho lasibatra ireo arabe tsotra izay tsy misy afa-tsy trano fisakafoanana roa monja. Nahoana no toeram-pilalaovana izay matetika falehan'ny olona. Tsy nisy famelezana ireo marika lehibe famantàrana. Tsy nisy na inona na inona nanjo ny Tilikambo Eiffel . Tsy nisy nanjo ny Champs Elysées. Fa solon'izay, ireo toerana anehoan'i Parisy ny loko marevaka sy ny fironana samihafa ao aminy no lasibatra. Tena daroka mivantana manana ny lanjany ho antsika rehetra iny. Eny fa na tsy mbola manana hevitra mazava momba ilay ‘isika’ aza aho.
Fito taona lasa izany no tonga teto Parisy aho mba hianatra ny resaka fanabeazana sy hiasa hamita ny fanohanana vokam-pikarohana izay tsy mbola vitako aloha hatreto. Ary mahatsikaiky fa ankehitriny dia an-dàlana ny ho lasa karazana mpikaroka momba ny fanabeazana sy ny fianarana aho eo, satria saiky ny zavatra rehetra nataoko hatramin'ny nahatongavako dia tena fianarana mihitsy. Nianarako ny maha-vahiny, ny mitolona ho an'ny fianarako, ho an'ny asa, ho an'ny taratasy.
Nianarako ihany koa izany miaina anaty tanàna iray malaza sy ireo ampahan-javatra ivelan'izany, izay vitsy no fantatry ny olona any ivelany. Nianarako ny momba ny endrika Parisy Arabo mambabo fo. Ny Parisy Antillais, ary ny Parisy Afrikàna. Fa koa ilay Parisy misy ireo vondrona samihafa fantatra amin'ny hoe mpila ravinahitra, mpifindra monina ary vahiny (izay, mahagaga, fa zavatra tsy mitovy, na tena miaina mifanakaiky kely aza ry zareo ireo). Amin'ny fomba maro, toa nateraka indray aho tao Parisy, izay tsy ny tanàna na marika iray (nampiasaina tafahoatra) no tsapako, fa koa toerana fifanakalozanà loko maro karazana, kolontsaina marolafy, foko maro fiaviana.
Vehivavy iray Venezoaliana mirehareha mitazana avy lavitra ny fireneny ihany koa aho, saingy mitazona akaiky ny fifandraisana aminy. Izaho tenako fotsiny dia efa fifangaroana loko sy fomba fijery izay tsy mitsahatra ny miova. Araka izany, izaho koa, dia ampahany amin'ireo loko isankarazany sy zompirenena samihafa izay misindintsidina eto amin'ity tanàna ity ka manome azy ny maha-izy azy.
Hatramin'ny nahatongavako teto Parisy dia narahako ireo adihevitra tsy misy fitsahàrany momba ny fiaviana, ny lokon-koditra, ny fianarana nodiavina ary ny resaka finoana ara-pivavahana. Nifototra tamin'ny fahatsapàna ifampizaràn'ny kolontsaina ny ampahany tamin'ireo asako. Ary lazaiko izany satria toa tsy mahasoa ny fizarazaràna izao tontolo izao ho “isika”‘ sy “izy ireo”. Ary tsy izany velively taloha. Raha ny marina, Ny famoronana ny fahasamihafàna no solika mandrehitra ireo rehetra ireo. Ary dia izany no ianarantsika mijery ny “tenantsika” sy ny “hafa”, ary io no maso nentintsika nianarana ny tantara sy nijerena ny vaovao. “Isika” sy “ry zareo”. “Eto” sy “any lavitra any”. Heveriko fa tsy ho vitantsika intsony ny hitazona io fomba fijery ny tontolo io ary hitahiry io fandàvana ny zava-misy io—amin'ny fiheverena hoe tsy ho vitantsika.
Raha misy zavatra tena manaitra ireo namana sy fianakaviana tonga mitsidika, dia ny fahasamihafàna misy eto an-tanàna izay noheverina ho ny fotsy no mibahana toerana. Nefa raha misy zavatra tena manaitra ahy, dia ny fomba anondroana ireo faritra ivelan'ny Andrefana ny anaty boky miresaka momba ny fifangaroana kolontsaina/fanabeazana/fifanakalozana. Mahazatra ny fanondroana hoe “Tiers Monde” (Tontolo Fahatelo/Tany mahantra). Teny samihafa no entina hamaritana ireo asa sy fikarohana avy any Eoropa sy Etazonia raha mitaha amin'ireo avy any Azia na Afrika. Ny fijery avy hatrany ataon'ny olona iray ny tontolo ivelany dia ny tsy fahampiana goavana manjavozavo be ao anatin'ny fahasarotana apetratsika ho an'ny tontolo manodidina antsika ihany. Lasa tena ampiasaina be ilay teny hoe “iraisan'ny kolontsaina”, saingy mitohy manjavozavo ny fototr'olana, ary lasa tsotra loatra tsy mahasoa ireo fifanakalozan-kevitra ikirakiràna ireo fanamby atrehantsika amin'izao fotoana izao.
Ny tsoakevitra nataoko avy ao anatin'izany rehetra izany, dia hoe manana endrika maro ireo namana ary tahàka izany koa ny fahavalo. Samy avy aminà loko samihafa na ny niharam-boina na ny mpamono ary nitafy ny karazam-pitafiana rehetra. Lasa tsy misy dikany tao anaty segondra iray ny fanamarihana olona iray na fametrahana azy anaty vata. Ary arakaraky ny hanginan'ny media momba ireo fanafihana sy tra-doza hafa, dia hiantraika amintsika ireny, hampilentika lalina ity fifandirana iy. Amin'ny toejavatra misy amin'izao fotoana izao, na tsy misy olona mahita ny hazo midaraboka aza, mitalakotrokotroka izany, mampihovitra ny tany eo ambany faladihantsika. Na vitsy aza ireo olona te-hiresaka momba ny fanavakavahana sy fanararaotana, mitranga ireny zavatra ireny.
Io no antony hieritreretako hoe tena faran'izay mora ny milaza hoe mifanohitra amin'ny soatoavi”ntsika” ilay fanafihana. Tsy fantatro hoe soatoavina inona, ary tsy azoko antoka hoe mety ho iza ilay “isika”. Rehefa niakatra sy nidina tao amin'ny Facebook, namaky ireo fihetsehampo, fijoroana vavolombelona, fomba fijery, antontanisa, hitako fa ireo olona avy amin'ny lokon-koditra rehetra no tena voadona tamin'ireo fanafihana, avy aminà zompirenana 15. Hitako koa fa ny sasany tamin'ireo mpamono dia teratany Frantsay ihany. Tsy hafa fa toy ireo mpanafika ny biraon'ny Charlie Hebdo. Ny zavatra eritreretiko izao dia mijery akaiky loatra ny loza izay tonga amin'ny fiheverana ny sasany ho toy ny tsy olona isika, ary miezaka ny mamaritra azy ireny aminà toetra iray na roa. Hitako ihany koa ny fitomboan'ny karazana kabary fandresena lahatra nasionalista, ireo saina sy marika, ary hitako ireo hafa matahotra ny fomba tsy anehoan'ireny marika ireny ny fihetsehampo mikatsaka fandriampahalemana, fa fisaraham-bazana sy valifaty aza.
Voavakiko ihany koa ny momba ireo tanora marobe izay voafatotry ny sary miresaka fahombiazana amidin'ny media, sy nolavin'ireo mpiray tanindrazana aminy ny maha-izy azy. Rehefa injay tonga aminà fikarohana momba ny herisetra any an-tsekoly izay miresaka ny fanabeazana ifanakalozana kolontsaina aho, mikasika ny “fidirana anaty fiarahamonina”, rehefa mandehandeha mitety ny mpiray vodirindrina amiko ary mahita vondrona tanora mijorojoro mandritry ny ora maro, toy ny tsy manao na inona na inona afa-tsy ny mifoka, rehefa injay aho miresaka amin'ireo namana izay misedra fanavakavahana tsotra sy mivantana, dia ao an-tsaiko ireo fifanakalozan-dresaka izay ilaina ho lasa lavidavitra kokoa.
Tsy hoe fifanakalozan-dresaka mora izy io, amin'ny fomba rehetra. Tena ao anatin'ny heviny tanteraka ny fiantsoana firaisantsaina Saingy ilay firaisantsaina resahantsika dia nandritry ny fotoana elaela no efa simba. Vao mainka hanaratsy zavatra ny fandetehana lalina ireny fisamantsamahana ireny eo ambany antso ho amin'ny firaisantsaina, ary vao mainka solika handrehitra bebe kokoa ny zavatra hafa ny fanohizana mitantara ny lanjan'ireo sasany niharam-boina mihoatra noho ny hafa.
Raha misy ny firaisantsaina, tsy afaka ny ho manavakavaka. Tsy hety hisy ho ahy mihitsy ny hahita an'izao sy tsy hieritreritra ny loza mahatsiravina miverimberina ao Venezoela tanindrazako, izay mitovy isa amin'io ny olona matin'ny herisetra, afa-tsy ny hoe amin'ity tranga ity dia isan-kerinandro ilay izy.
Na atao hoe samihafa aza ny fisehon'ireo, mifandray ireo noho ny maha zava-dehibe ny anjara toerana raisin'ny tanora, sy ireo mampiasa azy ireny. Tsapako fa tsy mahagaga ho anà mpikaroka iray momba ny siansan'ny fanabeazana ny handresy lahatra hiaro ny zo hahazo fanabeazana amin'izao fotoana izao. Saingy tsy hitako ny fomba handinganantsika izao rehetra izao raha tsy iasàntsika saina ny hikarakara ny andian-taranaka efa difotry ny hadisoam-panantenana ara-toekarena ankehitriny sy ny tsy fahalalàny ny maha-izy azy ara-politika.
Ireo mpiasa loha eto amin'ny firenena no ametrahako ny fanantenako, ireo izay itokiako fa hampiasa ny hàbaka misy azy any amin'ny media, mba hampahatsiarovana amin'ny firenena ireny olana maika be ireny, sady koa ao anatin'ity andian-taranaka vahoaka Frantsay vaovao ity. Enga anie ry zareo mba handàla ny soatoavin'ny fandriampahalemana, fa tsy ho azon'ny fandrik'ireo maniry hampiasa azy ireo ho amin'ny tombontsoa politika.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2015/11/16/76719/